Wafdi ka socda Somaliland oo wadahadal u tegay Turkiga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wafdi ka socda Somaliland oo wadahadal u tegay Turkiga
29th November 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Wafdi ka socda maamulka Somaliland ayaa ku sugan dalka Turkiga, iyagoo sheegay iney halkaas u tageen wadahadal ay la galaan dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Wasiirka Arimaha dibada Somaliland, Maxamed Biixi Yoonis iyo Wasiirka Madaxtooyada, Xirsi Cali Xaaji Xasan, ayaa ku sugan. Wasiirka Arrimaha debadda ayaa Isniintii la soo dhaafay tagay Turkiga halka Wasiira Madaxtooyaduna ka daba tagay Jimcihii shalay.
“Safarkan oo Insha Allahu qaadan doona maalmo kooban ayaan ku tegi doonaa dalka Turkey-ga, halkaas oo uu igaga sii horeeyo Wasiirka Arrimaha Dibeda Somaliland Mr. Maxamed Biixi Yoonis” ayuu shalay wasiir Xirsi sheegay, isagoo kusii jeeday Turkiga.
“Ujeedada socdaalkan ayaa ah sidii gudi ka socota Somaliland iyo kuwo ka socda Somalia ay gogol-xaar ugu sii samayn lahayeen wada hadaladii labada dhinac oo dib u furmi doona, isla markaana waxaanu diyaarin doonaa gudidii horay loogu balansanaa in la sameeyo “Secretariat Team” ayuu sidoo kale yiri wasiir Xirsi.
Wasiirada ka socda Somaliland ee ku sugan Turkiga ayaa sheegay iney doonayaan iney dunida u cadeeyaan iney wadahadal diyaar u yihiin.
Ma jiro war kasoo baxay dowladda Soomaaliya oo ku saabsan shirka la sheegay inuu mar kale ka dhacayo dalka Turkiga, iyadoo xilligaan ay caqabad weyn hortaalo dowladda Soomaaliya oo madaxdeeda khilaaf ka dhaxeeya.
Warshubo, 5 dhaawac Dhuusameeb
Dagaal lagu hoobtay oo maalintii labaad ka socda gobollada Dhexe